समृद्ध नेपालको आधारः सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र
Thursday, June 27, 2019 |बिहिवार, असार १२, २०७६
विशेष - रिपोर्ट , समाज
जनतापाटी डेस्क १० बैशाख ।
काठमाडौं । आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, स्वास्थ्य । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूपमा नागरिक स्वस्थ भएमा देशको उत्पादनशिल क्षेत्रमा नयाँ सोंच र उर्जाले काम गर्न सक्छ । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि हुनुमा त्यहाँका जनताको स्वास्थ्यमा पनि भर पर्दछ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्चेका हुन्छन् ।
नेपालले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वर्षेनी अर्बौ बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । नागरिक स्वास्थ्य संविधानले स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारभित्र राखेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मै भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । तर, आमनागरिकमा स्वास्थ्यको सहज रुपमा पहुँच पुर्‍याउनु ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउने भनिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष उत्तिकै जटिल देखिन्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न भने सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा समृद्ध देश र सुखी नेपालको अवधारणालाई पूरा गर्नका लागि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प छैन ।
शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र निरोगी रहनु, मानसिक रूपमा चिन्तारहित भएर उपयुक्त व्यवहार गर्न सक्नु, सामाजिक रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु र भावनात्मक रूपमा सकारात्मक सोंच हुनु एवं सन्तुष्ट हुनु नै स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूपमा स्वस्थ हुने अवस्था हो ।
सरकारले स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नगर्दा बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अझै पनि व्याप्त छ । देशको कुल बजेटको झन्डै ४ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य जगतमा सिन्डिकेट हावी हुँदा माफियाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । यसले के जनाउँछ भने स्वास्थ्य नीतिमा सरकारको यथेष्ठ गृहकार्य नभएको होकी भन्न सकिन्छ ।
केही वर्ष यता देशमा ठूला लगानीमा निजी अस्पताल त सञ्चालनमा आए तर ती अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न परिवारको पहुँच पुगेको देखिएन । अहिले सरकारसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याकं एकीकृत रूपमा उपलब्ध छैनन् । स्वास्थ्य अनुसन्धान स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख अंग भए पनि तथ्यांकमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
अनुसन्धान उपयुक्त र गहकिलो भयो भने मात्रै पनि स्वास्थ्य विषय र विशेषज्ञको क्षमता र गुणस्तर बढाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ । अनुसन्धानबाट नयाँनयाँ उपकरण र उपचार पद्घति विकास भइरहेको हुन्छ । यिनै उपकरण र उपचार पद्घतिका लागि नेपालले बर्सेनि अर्बौं विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
नेपालमा विगत १० वर्षमा निजी र सरकारी गरी ठूलाठूला अस्पताल उल्लेख्य रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । सोही अनुरुप डाक्टरको संख्या पनि थपिँदै गएका छन् । आज ती अस्पतालको भ्रमण गर्ने हो भने बिरामीको निकै चाप देख्न सकिन्छ । मानौं नेपाली नागरिक अस्पताल जानेबाहेक अरू कामै गर्दैनन् । नेपालको सरकारीदेखि प्राइभेट अस्पताल र क्लिनिक सबै व्यस्त नै रहेका छन् ।
हाम्रो देश नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्साका रूपमा देखाउने गरेको विदेशमा गएका कामदारबाट प्राप्त हुने वार्षिक रेमिट्यान्सको आँकडा हेर्दा औसत ८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी हाम्रो देश नेपालबाट वार्षिक औसत दुई लाख नेपाली बिरामी उपचारका लागि विदेश जाने गरेका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००० मा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । नेपाल पनि त्यसको सदस्य राष्ट्र भएकाले उक्त नारालाई मूर्त रूप दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक रणनीतिका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन ।
प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई प्रदान गर्ने भनिएको ७० प्रकारका औषधि (सबै प्रकृतिका) स्थानीय तहमा पाइँदैनन । विकट ग्रामीण क्षेत्रका जनता सिटामोलसमेत नपाएर दर्दनाक जीवन बाँच्न बाध्य छन् । सरकारले स्वास्थ्य प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्नुमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति गाउँ ठाउँमा पुर्‍याउन नसक्नु पनि हो । ठूला भनिएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायको सेवा सहर केन्द्रित हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा भएका जनशक्ति सहरमुखी हुनु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौति बनेका छन् ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापति गरेको छ । तर, यो कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहँुच बढाई जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तर, हाम्रो विडम्बना, राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समृद्ध बन्न सकिएन भने अन्य क्षेत्रको समृद्धि निरर्थक हुन्छ ।
उपलब्धि के भयो त ?
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति आएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति–२०६९, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सञ्चार नीति–२०६९, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका–२०६९, स्वास्थ्य संस्था स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका–२०७० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति तयार भई स्वीकृत भएको छ । चालू त्रिवर्षीय योजनाअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचक सुधार आएअनुरूप अपेक्षित आयु ६८ दशमलव ८ प्रतिशत, पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर ५४ (प्रतिहजार) शिशु मृत्युदर ४६ प्रति हजार, मातृमृत्युदर २८१ (प्रतिलाख)मा झरेको छ । सन् २०१० देखि मुलुकलाई कुष्ठरोग उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको छ ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पाँचको मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सफल भएकोमा अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट ‘एमडीजी एचिभ्मेन्ट अवार्ड’ र लक्ष्य चारको बालमृत्यु दरमा कमी ल्याउन सफल भएकोमा ‘मोटिभेसनल अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । सन् २०१२ को जुनमा जेनेभामा भएको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रजनन् स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेकोमा ‘रिसोल्भ अवार्ड’ बाट समेत नेपाललाई सम्मान गरेको छ । तर, पनि अझै स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र जगडिएको समस्या हल हुन नसकेको अवस्था छ ।
सरकारको तथ्याकंअनुसार सहरी क्षेत्रमा झन्डै ७० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशत सेवा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । गाउँ र गरिबसम्म उपचारको न्यूनतम सेवा पुर्‍याउन सरकारले तत्कालै आवश्यक चिकित्सकको दरबन्दी सृजना गरी चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्य तहका सरकारी अस्पतालमा पनि डाक्टरको ठूलो खाँचो छ ।
सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौति भएको बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडेमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेक लालले सरकारले स्वास्थ्यका कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भएको बताए ।
‘एक त स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन पर्याप्त मात्रामा गरेको छैन । अर्कोतर्फ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको नजरले हेरेको पाइँदैन जसकारण पनि समस्या सृजना भएको देखिन्छ’, उनले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकताको नजरले हेर्न सके मात्रै समृद्ध नेपालको नाराले सार्थकता पाउने उनले बताए ।
५४ करोडको कचौराः जसमा टेनिस बल राख्थे एक दम्पति
पूर्वमुख्यसचिव मल्लको निधन
इतिहासकै कमजोर बन्यो पाकिस्तानी मुद्रा
सन्तानका कारण ट्रोल भएका सेलिब्रेटी आमाहरु
मडागास्करमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा भागदौडमा परी १६ जनाको मृत्यु
अज्ञात समूहको कुटपिटबाट युवकको मृत्यु
नेपालमा हनिमून पीरियड पत्रकारिता र यसको असर सविन शर्मा
चन्दा दिने मन, चन्दाको रंगशाला यम घिमिरे
दुई–तिहाईको सरकारको लोकप्रियता कति र किन ? गाेपाल ठाकुर
संसदमा विप्लवको प्रवेश : भयो यस्तो हंगामा !(भिडियाेसहित)